Ndinoshuva Kuti Vatengesi Vangarega Kutaura Izvi ... Martech Zone
China, May 7, 2015 Chishanu, February 2, 2018 Douglas Karr
Ini naJenn takashanyira dzimbahwe re Genesys vhiki ino uye vakagara pasi yavo timu yekushambadzira yedhijitari uye mumwe wemibvunzo yakakwira ndeyekuti takamboisa infographic kumashure kwekunyoresa. Takakurumidza kupindura kuti takanga tisati tamboita zvakadaro. Iyo Inopindirana timu yakati ivo vaimboita bvunzo nezvose a whitepaper uye infographic uye 0% yakanyoreswa uye kurodha pasi whitepaper uye 100% yakanyoreswa kuti vaone infographic.
Ini ndinonyatsoda patinosangana nezvikwata zvinopesana nemamiriro ezvinhu uye kuyedza chimwe chinhu chakadai. Izvo zvakakosha kuti isu, sevashambadziri, tiende tichipesana nekwedu kusarudzika kana nzvimbo dzenyaradzo uye toita yedu yakakodzera kushingairira kuyedza ese mamiriro.
Vhiki ino, ReachForce vakaburitsa hurukuro yavakaita neni pa Big Data uye kushambadza uye uyu ndiwo musoro wenyaya wandinofarira. NeBig Data, vashambadziri vanogona kuoneswa-chaiyo-data data neiyo 4 V's ... vhoriyamu, zvakasiyana, velocity uye chokwadi. Iko hakuna kungova chikonzero chevatengesi vane zviwanikwa zvekuyedza uye kuyera ose kudyidzana mazuvano.
Chirevo chandinoshuvira kuti vatengesi varege kutaura kuti
Takamboedza izvozvo zvikaramba.
Ini ndinopokana nedudziro yavo ye akaedza pamwe nemubvunzo wavo we hazvina kushanda. Isu takave netariro imwe, semuenzaniso, iyo yakati havana kuita SEO nekuti tarisiro yavo yese yakabva kuFacebook. Ndakabvunza kuti vaiisepi bhajeti yavo… kwete zvinoshamisa kuti zvese zvaive muFacebook. Zvakanaka, hazvireve kuti kutsvaga kwekushambadzira hakuna kushanda, zvinongoreva kuti zviwanikwa hazvina kushandiswa kuzviedza zvechokwadi uye kuona kana paine yakanaka ROI. Ndiwo musiyano mukuru.
Padivi peichi chirevo kune vamwe:
Isu tinowana rese bhizinesi redu kuburikidza nekutumira uye neshoko remuromo.
Zvemagariro midhiya hazvishande.
Hatina nguva yekugadzira zvemukati.
Kuongorora kushoma pane izvi kazhinji kunowana saiti isingawanikwe pakutsvaga, hapana zvemukati marongero, kushaya ruzivo rwekuonana kana fomu risingashande pawebhusaiti, hapana purogiramu yekutengesa email ... Zvakanaka hazvishamise kuti bhizinesi rako rese rinouya kuburikidza nekutumira uye neshoko remuromo! Iko hakuna imwe nzira yekuita bhizinesi newe online!
Makore mashoma apfuura, ini ndaizonyunyuta kuti dambudziko ne analytics ndeyekuti zvakangwara sekuti mushandisi ane ruzivo uye akaomesesa kuishandisa. Mhanya chirevo usingachere zvakadzika, uye iwe unogona kuita sarudzo dzakaipa uchishandisa analytics. Kuita sarudzo dzakasimba kunoda kuitiswa kwakasimba kwe analytics uye kumisikidza iyo data kunoda ruzivo. Analytics chishandiso chikuru che kubvunza mibvunzo, asi chishandiso chinotyisa che kutsvaga mhinduro.
Big Data, Data Management Platforms, maDashboard, uye zvimwe zvishandiso zviri kunyatso kuuya kumberi. ReachForce inogadzirisa masangano 'matambudziko emhando dhata nekuchenesa yavo data - de-kubiridzira, kuenzanisa, kururamisa, kugadzirisa uye kuongorora - pane otomatiki uye inoenderera hwaro. Zvese zvaunoda kuti utange kunyatso kuyera uye kuita yakanakisa mishambadziro yekushambadzira yave kuwanikwa.
Kambani inonakidza yandakasangana nayo nguva pfupi yadarika yaive Peerview - vari kuenzanisira mari yekambani kuzere nezvinhu zvakaita sekushambadzira kwavo kuitira kuti vagone kuona kuti vanonongedza sei vachienzanisa nemakwikwi avo nemaindasitiri. Fungidzira uchikwanisa kuratidza yako bhodhi kuti yako yekushambadzira mari iri pasi pevhareji kana yako mutengo pamutungamiri uye kukura kuri kuwanda kweiyo indasitiri! Aya mhinduro anowanikwa kwatiri izvozvi.
Izvo zvisingawanikwe, zvakadaro, ndiyo tarenda uye zviwanikwa zvekushandisa tekinoroji.
Tarenda rinonetsa kuwana kupfuura maturusi. Kuve nevekushambadzira vaongorori vanokwanisa kuyedza nemazvo, kuyera uye kuita zvekufungidzira kuri kuwedzera kuoma kupfuura nakare kose. ReachForce Bvunzurudzo
Tiri kushanda nemakambani ekubvunza senge Perscio, avo vari kuvandudza zvinoshamisa mamodheru ekufanofungidzira kuongororwa ayo vashambadzi vanozogona kushandisa kuti vanzwisise zvirinani nzira yavo yemuchinjikwa - kuona shanduko mukushambadzira kwavo kushambadzira kuchakanganisa mhedzisiro nekushamisa kunoshamisa.
Huwandu hunotyisa hwemakambani atinobvunzurudza nekushanda nawo hahuzoyera uye, pachinzvimbo, vachiri kutengesa kubva muchiuno. Aya haasi Amai & Pops… mamwe acho makambani eFortune 500. Ivo vanodzivirira nzira dzakayerwa dzeyero uye ratchet pasi masisitimu ayo anogona kugadzirisa kwavo kushambadzira sarudzo nekuti iwo mamwe masystem anopawo glaring yekuzvidavirira metric. Ivo ndivo mhando yevatungamiriri iyo nitpick pamaitiro anoita chimwe chinhu kana ruzha, ichienderera mberi ichinonoka kuitiswa kwechirongwa uye kuyera kukanganiswa nekuti havana ruzivo rwekuti zvichaita sei.
Sevashambadziri, tinogona kuita zvirinani. Tinofanira kuita zvirinani. Zvishandiso zviripo!
Tags: big datakuyambuka-chiteshi kushambadzirautsanana hwe datadata manejimendi mapuratifomudmpyekudyidzana njerevatengesizvikonzero zvekushambadzirapeerviewpersciovangaachiti
May 7, 2015 pa 10: 11 AM
AMEN! Zvinosuruvarisa ndinonzwa izvi nguva dzose. "Takaedza izvo makore gumi apfuura asi zvakaramba." Ndinozvinzwa kazhinji kubva kuvanhu vakashanda kukambani iyi kwemakore gumi nemashanu. Tinoita sei kuti vanhu vatarise kumberi kwete kumashure? Kana kuvimba kuti mazano matsva anogona kushandura zano rekare kuita rakanaka?
May 11, 2015 pa 3: 21 PM
“Zvakanaka hazvishamise kuti bhizinesi rako rese rinouya kuburikidza nekutumira uye neshoko remuromo! Hapana imwe nzira yekuita bhizinesi newe pamhepo! ”
Izvi! Izvi! Kane miriyoni izvi!
Ndanzwa vatungamiriri vasingaverengeki vachizvideredza kwandiri nemitsetse nezvekuti “hazvisi izvo zvinoshanda muindasitiri yedu. 98% yebhizimusi redu rinobva mukufona kutonhora.
Ehe… Kana iwe ukagovera 98% yako anotungamira gen bhajeti kune yekufona nzvimbo, izvo zvinowanzoitika.
Doug - Wakambofunga kuita chidzidzo chekutanga nezvekuti internet inotungamira sei kune bhizinesi? Nenhamba yevatariri vasinganzwisise izvo zvekutanga, ndinofunga iwe ungauraya! 🙂
Ndira 31, 2018 na5: 17 PM
Ichi chinyorwa chinobatanidza neInteractive Intelligence, iyo yakatengwa naGenesys munaZvita 2016. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve ichi kutora, ndapota shanya: https://www.genesys.com/inin